- edizione Shona # 6
ISHE Vedu avo Vanove Kururama kwaMwari ( II )
- Kururama kwaMwari uko kunoratidzwa muna VaRoma
ISBN : 9788928209781
Evhangeri yemvura noMweya ndiyo kururama kwaMwari
Mashoko ari mubhuku rino achapedza nyota iri mumoyo mako. VaKristu vanhasi vari kungorarama vasingazive mhinduro yezvokwadi pamusoro pezvivi zvomene zvavanopara zuva rimwe nerimwe. Unozive here kuti chii chinonzi kururama kwaMwari? Ndinovimba kuti uchazvibvuza mubvunzo uyu, ugova nekutenda mukururama kwaMwari, uko kunoratidzwa mubhuku rino.
Kururama kwaMwari kwakagara kuri muevhangeri yemvura noMweya. Asivo, sepfuma inokosha, yakaramba yakavanzarikwa pameso evateveri vezvitendero kwenguva refu kwazvo. Medzisiro yakava yekuti vanhu vazhinji vakatanga kuvimba pamwevo nokuzvikudza pamusoro pekururama kwavo pachavo, kunze kwekuti vatende mukururama kwaMwari. Naizvozvo, zvitendero zvechiKristu zvisina nemusoro wese zvakatanga kukurumbira pamwe nokubatisiswa mumoyo yevazhinji, kuita sezvinonzi zvitendero izvi zvine kururama kwaMwari mazviri. Dzidziso dzeKutemerwa-kare, Kushairwa-mhosva, neHutsvene-hwepamhidziro ndidzo dzidziso dzechiKristu dzanyanyokurumbira pakuvhiringa pamwevo nekukonzera shayisano mumoyo yevatendi. Asi zvino, vaKristu vazhinji vanofanira kuziva Mwari, vagodzidza kururama kwake uye vagoramba vachirarama mukutenda kwakasimbiswa.
“Ishe vedu avo vanove kururama kwaMwari” ibhuku richawanisa moyo wako kunzwisisa kukuru, rigomutungamiriravo kurugare. Chishuvo chemunyori kuti uwane ropafadzo yekuziva kururama kwaMwari. Maropafadzo aMwari ave nemi!
Edizione Shona 6